Yintoni iSMS? Iinkcazo zeNtengiso yeFowuni
Yintoni iSMS? Imiyalezo ebhaliweyo kunye neeNkcazo zeNtengiso yeFowuni
NgoLwesine, Julayi 16, 2015 NgoMvulo, nge-16 kaJanuwari, 2017 UAdam Omncinci
Yintoni iSMS? Yintoni iMMS? Yintoni iikhowudi ezifutshane? Yintoni igama eliphambili leSMS? Kunye UkuThengiswa kweSelula ukuba yinto ephambili ndacinga ukuba ingangumbono olungileyo ukuchaza amanye amagama asisiseko asetyenziswayo kushishino lokuthengisa olushukumayo.
I-SMS (IiNkonzo eziMfutshane zeMiyalezo)Umgangatho weenkqubo zokuthumela imiyalezo ngomnxeba ezivumela ukuthumela imiyalezo phakathi kwezixhobo eziphathwayo ezinemiyalezo emifutshane, ngesiqhelo enombhalo kuphela. (Umyalezo wegama)
I-MMS (Inkonzo yemiyalezo yemultimedia) yindlela esemgangathweni yokuthumela imiyalezo ebandakanya umxholo wemultimedia ukuya nokubuya kwiselfowuni.
Ikhowudi emfutshane eqhelekileyo (Ikhowudi emfutshane)Iinombolo ezimfutshane zamanani (ngokwesiqhelo ama-4 ukuya kuma-6) ekunokuthunyelwa kuwo imiyalezo ngefowuni. Ababhalisi ngaphandle kwamacingo bathumela imiyalezo kwiikhowudi ezimfutshane eziqhelekileyo ezinamagama aphambili afanelekileyo ukufikelela kumxholo ophakamileyo weselfowuni.
igama elikhokelayo-Igama okanye igama elisetyenziselwa ukwahlula umyalezo ekujoliswe kuwo ngaphakathi Inkonzo emfutshane yeKhowudi.
La ngamanye amagama asisiseko asetyenzisiweyo kwi Intengiso yeSMS. Nokuba inkcazo ye shortcodes uninzi lwabantu lusafuna ingcaciso ethe kratya kwindlela esebenza ngayo yonke into.
Ndizama ukuyicacisa ngokwe-Intanethi nangamagama wesizinda. Cinga nge shortcode ngokufana negama lesizinda kunye igama elikhokelayo ifana nephepha. Xa ufuna iindaba ungaya kwi ulwaphulo-mthetho (Igama eliphambili) iphepha le- CNN.com (Ikhowudi emfutshane).
Okanye… nokuba ngcono, xa ufuna ukubhalisa nge-imeyile Martech Zone, isicatshulwa Marketing (Igama eliphambili) ukuya 71813. Yizame… yile isicatshulwa sokubhalisa umanyano phakathi kwenkonzo yethu yeSMS kunye I-CircuPress!
Imiyalezo ebhaliweyo inokusetyenziselwa ukunikela / ukuhlawula imali okanye ukudlulisa ikhonkco kumsebenzisi oshukumayo ukuba ajonge iwebhusayithi, avule isicelo, okanye abukele ividiyo kwifowuni yakhe.
Yintoni ukuthengisa ngeSMS
Platforms ezifana Imfono yokuxhuma vumela abathengisi ukuba basasaze igama eliphambili kunye nekhowudi emfutshane kubasebenzisi ukuba babhalisele imiyalezo ebhaliweyo. Ngenxa yokuba umyalezo obhaliweyo ungena ngaphakathi, uninzi lwababoneleli bafuna indlela yokungena kabini. Oko kukuthi, ubhala igama eliphambili kwikhowudi emfutshane, emva koko ufumane isicelo sokubuza ukuba ungene kunye nesaziso sokuba imiyalezo inokufumana ityala ngokuxhomekeke kumboneleli wakho. Amaqonga obhaliso avumela ukuba ucwangcise imiyalezo kwaye ujonge ukunika ingxelo ngokusebenza kwephulo.
Nantsi ividiyo yokuba kutheni ukuthengisa ngeSMS kusebenza ngokufanelekileyo:
Nantsi imbali enkulu yoMyalezo obhaliweyo osuka NeonSMS:
* Ezi ngcaciso zihambelana ne Umbutho weNtengiso yeFowuni. Iinkcazo ezingakumbi ziyafumaneka kwi Imfono yokuxhuma.
tags: isetyhulaiselfowuni eqhagamshelekayoamagamaiinkcazo ezihambayoiikhowudi ezimfutshaneinkqubo emfutshane yomyalezoi-SMSukuthengisa ii-smsImiyalezo yesmsukuthengisa imiyalezoimiyalezo ebhaliweyoisicatshulwa sokubhalisaukuthumela imiyalezoyintoni ikhowudi emfutshanelithini igama eliphambili lesmsyintoni mmsyintoni i-sms
Usebenzisa njani ngokuBalisayo ukuBalisa amaNqaku ngeNtengiso yaKho ngo-2015
Ukudideka kweNtengiso kuMbutho weNtengiso
Ifoto entle, Adam! BendikwiNgqungquthela yeNtengiso ye-Intanethi ezantsi eHouston kwaye omnye wabasasazi usebenzise le ndlela. Ucele wonke umntu ukuba athumele umyalezo ngedilesi ye-imeyile kunye negama eliphambili kwikhowudi emfutshane kwaye baya kuthumela umyalezo nge-imeyile.
Jul 25, 2009 ngo-3: 26 AM
Enkosi Doug! Enye yeenkonzo esizibonayo kwiConnective.
Okt 15, 2014 ngexesha 5:41 AM
Ngaba unxibelelwano oluxubileyo nalo luyadityaniswa kwi-API?
Okt 15, 2014 ngexesha 8:50 AM
Ewe, Imfono yokuxhuma ine-API epheleleyo.